Linux uye yakavhurwa sosi inouya kuMars neUngwaru | Linux Vakapindwa muropa
Linux uye yakavhurwa sosi inouya kuMars neUngwaru
Isaac | | GNU/Linux, Noticias, Free Software
Kunyange zvakadaro haisi nguva yokutanga , que NASA uye mamwe ma space agency vanoshandisa yemahara software, kana yakavhurwa sosi Muchadenga, ichiri chokwadi kuti mumamishinari akakosha uye akakosha seaya, rudzi urwu rwepurojekiti rwunovimbwa (kunyange hazvo makambani mazhinji epurogiramu epurogiramu achiramba achizviona sechinhu chakaderera mhando). Linux uye yakavhurwa sosi vakatoyambuka miganho yepasi mumamishini akati wandei, uye zvakare vanozviita nerubatsiro rweUchenjeri.
Chokwadi kare unorangarira dzimwe nyaya here sezvakaita iyo International Space Chiteshi (IIS) kuti ini ndakachinja Microsoft Windows yeDebian, mashandisiro anoita mamwe marobhoti ROS, uye mamwe akawanda mapurojekiti yatakatotaura kare pamusoro peLxA. Zvakanaka, ikozvino unogona kuwedzera iyi imwe iyo inokushamisa iwe ...
Sezvaunoziva, iyo Mars Perseverance probe yakavhurwa nguva pfupi yadarika uye ichayedza kuongorora nyika tsvuku zvakadzama kuti irambe ichidzidza zvinhu nezveMars, sekusimbisa kana yakambogara hupenyu, kuongorora mamiriro azvino, nezvimwe.
Kana chirongwa ichi chaitwa inoshanda pamusoro peMars, yatanga kutaurisa dhata rakanangana nepasi, iine huwandu hwemifananidzo iyo masayendisiti, senge mageologist, anogona kuongorora kuti aone kana ari sedimentary kana volcanic mavambo, zvinogona zviratidzo zvemvura, nezvimwe.
Zvakanaka, chimwe chezvigadzirwa izvo Mars Kutsungirira zvine izvo iyo Huchenjeri yakazvimiririra helikopta. Rudzi rwe drone iyo inobhururuka pamusoro penzvimbo yeMartian kuitira kuti itore data rakakosha kudai. Kunze kwekuyedza mhando iyi yenzira dzekubhururuka mumhepo yakatetepa zvakapetwa kagumi pane iyo yePasi uye iine 10/1 yegiravhiti yayo.
Iri robhoti rakanzi Uchenjeri chichava chinhu chekutanga chakagadzirwa nevanhu kubhururuka pamusoro peMaris. Uye yakavakwa uchishandisa teknolojia inonyanya kufarirwa kana iwe uchigara uchiverenga LxA. Semuyenzaniso:
Processors Qualcomm Snapdragon 801 pa500 Hz, yakadzika chaizvo frequency, asi inokwana pachinangwa chako. Uye zvakare, iwo macirconi akadzivirirwa (RD) maseketi.
Sechirongwa chekushandisa, zvingave sei neimwe nzira, icho chinoshandisa Linux. Kutenda kwazviri, iyo VxWorks chaiyo-nguva system inogona kutsiviwa, inova ndiyo yeimba inoshandiswa muMars Perseverance pachayo uye mune mamwe ma rovers.
Zvakare, inoshandisa yakavhurika sosi sisitimu inonzi F 'kana F prime, Yakagadziridzwa muJPL propulsion murabhoritari yekushandisa kwakasiyana kwenzvimbo, kunyanya kune zvishandiso zvekubhururuka seCubeSats, SmallSats, nezvimwe.
Uye kana izvo zvichiita sezvishoma kwauri, shandisa zvakare ffmpeg, software inozivikanwa iyo iwe yawakanyatsoshandisa mune yako distro, uye iyo Preseverance inoshandisa kumanikidza vhidhiyo iyo yainotumira kubva kuMars kuenda kuPasi ...
Zvese kugona famba wakazvimirira uye kushandisa ino diki helikopta yemamita 1.2 muhukuru uye huremu hwe2 kg.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux uye yakavhurwa sosi inouya kuMars neUngwaru
Iyo yekuvhima yekuvhima inouya kumavhidhiyo mitambo. Nguva yekumisa izvi
DXVK 1.8 inouya kugadzirisa nyaya nemamwe mazita, akawanda-tarisa ekutsigira ekuvandudza, uye nezvimwe